यी ५ तरिका, जसले दिन्छ बिर्सने समस्याबाट छुट्कारा ! - Nigranitimes
होमपेज / जीवनशैली / यी ५ तरिका, जसले दिन्छ बिर्सने समस्याबाट छुट्कारा !
शुक्रबार, भदौ ०५, २०७७ , निगरानी टाइम्स
भदौ ५ गते, काठमाडौं । आजभोलिको व्यस्त जीवनशैली अवथा तनावग्रस्त जीवनमा प्राय मानिसलाई बिर्सने समस्या रहेको हुन्छ । अथवा प्राय कुराहरु केही समयको अन्तरालमै याद नहुनसक्छ ।
आफ्ना दैनिक कामकाज, बैठक, साथीभाई भेटघाटका विभिन्न कार्यक्रम बनाएर पनि तपाईले आफैले भुलिरहेको हुनसक्छ अथवा कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु छुटिरहेको हुनसक्छ । यी समस्याबाट छुट्कारा पाउन केही नियमको पालना गरे सहज पनि रहेको छ ।
सामान्यतया खराब जीवनशैली र खानपानका कारण मानिसमा बिर्सने समस्या देखिन थाल्छ । तर केही प्राकृतिक उपायहरु अवलम्बन गर्दा यो समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
१. ध्यान गर्नु
दैनिक रुपमा ध्यान गर्नाले मनको शान्ति तथा तनावबाट मुक्त हुन सहज हुन्छ । जसका कारण मानिसको सम्झनसक्ने शक्तिमा वृद्धि हुन्छ ।
२. पर्याप्त निदाउनु
व्यस्त जिन्दगीमा आरामले ठूलो महत्व राख्दछ । जब पर्याप्त रुपमा आराम र निन्द्रा शरीरले पाउँछ, स्वास्थ र सक्रिय महसुस हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार वयस्क उमेरमा स्वास्थ रहनका लागि दैनिक ७ देखि ९ घण्टा निदाउन आवश्यक छ ।
३. तौलमा सन्तुलन
सम्झाना शक्तिमा शरीरको तौलले पनि असर गरिरहेका हुन्छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि तौलको सन्तुलन महत्वपूर्ण रहन्छ । मोटोपनाले मस्तिष्कमा प्रभाव पार्ने भएकाले तौल सन्तुलित हुन आवश्यक छ ।
४. रिफाइन कार्बोहाइड्रेडको सेवन घटाउनु
खानामा केक, कुकिज्, सेतो ब्रेड अथवा चामलको मात्रा धेरै छ भने पनि सम्झना शक्तिमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । जसका कारण ब्लड सुगरको मात्रा बढ्छ र शरीरलाई हानी पुर्याउँछ ।
५ मद्यपान नगर्नु
आजकल अधिकांश व्यक्ति मद्यपान तथा धुम्रपान गर्ने गर्दछन् । मद्यपानले मानसिक स्वास्थ्यमा सिधा असर गर्ने भएकाले बिर्सने समस्या बढाउन मुख्य भूमिका खेल्दछ । मद्यपानले दिमागलाई नकारात्मकतातर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको हुन्छ । नागरीखबरबाट
नमूना विद्यालय जनसेवामा स्कुल बसको व्यवस्था
कानेपोखरीमा अध्यक्ष कपको उपाधि वडा नं. ५ ले चुम्यो